गणतन्त्र लूटतन्त्रमा परिणत गरिँदै
संंघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दिनमा समावेशी संविधान पाएर पनि मुलुक अझै गतिहीन हुनुको जड हो दण्डहीनता, विधिविहीनता, चुलिएको भ्रष्टाचार, कुशासन तथा सत्ताले अपराधीलाई संरक्षण र कदर, जातीय विभेद जस्तो खेदजनक परिस्थिति र विकृतिहरूले गणतन्त्रलाई लूटतन्त्रमा परिणत गरिदैछ । यो कलंकमात्र होइन, गणतन्त्रको यात्राका बाधा–व्यवधान पनि हुन् ।
गैरदलितले नबुझेका दलितका कुरा
संविधानले नै आफ्नो नागरिकको खण्डित परिभाषा गरेर भेद स्वीकार गरेको छ । जसलाई दलित आफैंले संविधानमा राख्न लगाएका हुन त्यो संबैधानिक ब्यबस्था भनेर दलित शब्द आफैंमा विभेदकारी छ । संविधानमै दलित लेख्ने अनि दलित भने भनेर बिमति राख्ने शैली पनि विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । जसलाई सच्याएर जानु पर्ने हो कि ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सहानुभूति र सदासयता सहित रुकुम घटना प्रसंगलाई तिम्रो सदासयता गोहीको आँशु हो तिमीले के गर्यौ, तिम्रा बंशले के गरे भन्ने समेतको प्रश्न दलित अगुवा र दलित प्रतिनिधिको देखियो यो निसेधात्मक र समुदाय समुदायको खाडल गहिरो बनाउने र दलित आन्दोलनलाई अन्य समुदायको समर्थन र सहयोगबाट बन्चित गराउने जान अन्जान त्रुटी हो ।
कसको लागि हो गणतन्त्र ?
अर्कोतर्फ नयाँ नेपाल बनाउने आशा देखाएका दलहरुले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकै तहमा भित्रिएको विदेशी चासोलाई समेत रोक्न सकिरहेका छैनन् भने विभिन्न गुट तथा उपगुटहरुको भूमरीमा राजनीतिक दलहरु अहिलेपनि विभक्त देखिन्छन् । नेपाली गणतन्त्रले १२ बर्ष पार गरिसक्दा समेत जनताको अधिकार जनताकै हातमा अझै पुगेको छैन । त्यसमाथि मुलुकको एउटा सानो जमात अझैपनि राजा सहितको प्रजातन्त्र भन्दै हिँडिरहेको छ भने अर्को समुह हिंसाको राजनीतिमा लागेको छ ।
राष्ट्रवाद जिन्दावाद ! समाजवाद जिन्दावाद !
जुन आन्दोलनसंग दरबार टिक्न नसकी संसदको पुनर्स्थापना भयो । तिनै स्थापित सदनलाई राजनीतिक अवसर बनाउँदै संबिधान सभामार्फत राज संस्थाको अन्त्य गर्दै देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादको संसारमा पुर्‍याउने सपना पनि देखाएर भने, ‘समाजबाद जिन्दाबाद !’ द्वन्द्धकालमा अर्काको दुष्मन नेपाली कांग्रेस र माओबादीले सिद्धान्तलाई रुपन्तरण गर्दै लगे र भने, समाजबाद जिन्दाबाद !’
नेपालको नक्सा राजनीतिको नालीबेली
कालापानी र लिम्पियाधुराको बीचमा गुञ्जी, नाभी, कुटी, छाङरु गरी चारवटा गाउँ पर्दछन् । ती गाउँको जनगणना, मालपोत संकलन लगायतका अन्य दस्तावेजहरु नेपालसँग सुरक्षित भएकाले यो भूमि निर्विवाद नेपालको हो । तर भारतले १९५० को दशकमा तिल्सी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गरी त्यही ठाउँलाई कालापानी नाम दिई महाकालीको उत्पत्तिस्थलका रुपमा समेत त्यहीँको एउटा सानो खोल्सालाई देखाउँदै आएको छ । भारतले आफूले ओगटेको ७० वर्ष भइसकेकाले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको दावी गरेको छ ।
गरिवी र भ्रष्टाचार शुन्य समाज निर्माणमा सरकार कहाँ चुक्यो ?
आजका दिनमा निर्वाचन भएको कार्यकालका आधा समय वित्यो र विकासको संकेतसम्म पनि शुभ देखिँदै छैन । सत्तासिन दल आन्तरिक किचलोमा रमाएको छ । प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि अस्वस्थ छन । वाक चतुर्याइ र छुद्र वोली उनको आजका दिनमा सत्ता टिकाउने प्रमुख अस्त्र बनेको छ । यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल भित्र एकाद दीप देखिएपनि यो आफैं पूर्णतय औंसीको रात्रीमा नागमणीको प्रतिक्षामा छ । ताकी त्यो कुनै मेहनत विनै आँफै चम्कीयोस र त्यो अध्यारोबाट मुक्ती मिलोस् ।
सबैभन्दा ठूलो प्रमाण बृहत् भूमिलाई अंग्रेजले छल गरेर सुगौली सन्धीमार्फत् लगेको जमिन र त्यहाँका बासिन्दा हुन् जो अझै नेपाली भारतीयका रुपमा बाँचेकै छन् । अंग्रेजसँगकै कुरा गर्दा त भारत पाकिस्तान र बाङ्लादेशका रुपमा विभाजित भइसकेको छ र ती जमिन भारतले जोगाउन सकेको छैन । अनि किन नेपाली जमिनको बढी वास्ता ?
छ दशकदेखि नेपाली भूमिमा विदेशी बूटः जिउँदा नौं शासकलाई यो प्रश्न
मर्ने त मरे । तिनलाई भनेर केही अर्थ छैन । तर पटक पटक सत्तामा पुगेको तर सिन्को भाँचेको नदेखिएका जिवित नेताहरुले भने यसको जवाफ दिनैपर्छ । २०४६ यता बारम्बार सत्ता सम्हालेका जिवित नौं नेता छन्, तिनले दिनुपर्छ यसको जवाफ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित नौं थान नेता शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, केपी ओली त अझै जिवित छन् । ति सबैले आ–आफ्नो शासकीयकालमा नेपाली भूमि जोगाउन र फिर्ता ल्याउने प्रयाससम्म नगरेकामा सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरून् । अन्यथा जता मल्को उतै ढल्को झै अहिले तीन हातमाथि उफ्रिएर क्रान्तिकारी राष्ट्रवादिता प्रदर्शन गर्नुको कुनै तूक छैन । चेतना भया !!!